မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်ဆိုတာ?? - For her Myanmar
“မိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်ဆိုတာ …” လို့ အစချီတဲ့ စာသားတွေကို လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ မကြာခဏမျှဝေကြတာကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ရှေးအစဉ်အလာ စာပေတွေမှာလည်း မိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်တွေမှာ ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေအကြောင်း ရေးသားထားတာကိုလည်း မြင်ဖူး ကြားဖူးကြမှာပါ။
သူတို့ အဆိုအရ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းရင်၊ မိဘကို ရိုသေလေးစားရင်၊ လင်ယောက်ျားကို ရိုသေလေးစားရင် မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ် တဲ့ …
အိမ်မှုကိစ္စကျွမ်းကျင်နို်င်နင်းရင်၊ အနေအထိုင် ပိရိသေဝပ်ရင်၊ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ် တဲ့ ….
အဝတ်အစားလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ရင်၊ မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စားဆင်ယင်ရင် မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ် ပါတဲ့။
အပြင်ထွက်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးမျိုး၊ အိမ်မှုကိစ္စ စိတ်မဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးမျိုး၊ အဝတ်အစား မလုံမခြုံဝတ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုး၊ အနေအထိုင် လွတ်လပ်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးက မိန်းမကောင်းစာရင်းမဝင်ဘဲ မိန်းမပေါ့ မိန်းမပျက်စာရင်း ဝင်တယ်လို့ သူတို့က ယူဆကြပါတယ်။
Related Article >>> မိန်းမဆိုတာကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာ မှန်ရဲ့လား
ဒီလို သမားရိုးကျအမြင်တွေကို ဘေးအသာချပြီး အက်ဒ်မင်တို့ ရိုးရိုးလေး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။
မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘယ်လို မိန်းမမျိုးကို မြင့်မြတ်တယ်လို့ ခေါ်နိုင်တာလဲ?
ဘယ်လို လူသားမျိုးကိုရော မြင့်မြတ်တယ် ခေါ်ဆိုကြတာလဲ?
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မြင့်မြတ်မှုကို သူရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ တိုင်းတာတာ မှန်ကန်ပါရဲ့လား?
ဣနြေ္ဒနဲ့ သိုသိုသိပ်သိပ် နေထိုင်ခြင်း၊ အနေအထိုင် လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ မတူညီတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေပဲ မဟုတ်လား ယောင်းတို့ရေ…
ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး သူကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့သူ၊ သူကတော့ ဆိုးယုတ်တဲ့သူလို့ တိုင်းတာလို့ ရမယ်လို့ အက်ဒ်မင်ကတော့ မထင်ပါဘူး။
Related Article >>> မိန်းမဆိုတာ ပါရမီဖြည့်ဖက် သက်သက်ပဲလား?
ယနေ့အချိန်ထိ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာရော မြန်မာ့သမိုင်းမှာပါ နာမည်ကျော်ကြား ထင်ကျန်ရစ်သူတွေဟာ ယောက်ျားပဲဖြစ်ပါစေ၊ မိန်းမပဲဖြစ်ပါစေ သူတို့ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲ နာမည်ကျော်လာတာပါ။
မာသာထရီဇာ၊ ဖလောရင့် နိုက်တင်ဂေး၊ မာဂရက်သက်ချာ စသဖြင့် ယနေ့အထိ လူတွေမမေ့နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတွေ အောင်မြင်ထင်ရှားလာတာက သူတို့ရဲ့ အနေအထိုင် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၊ ဇွဲသတ္တိနဲ့ ကြိုးစားမှု စတဲ့ အရည်အချင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူသားတွေရဲ့ အကျိုး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုး၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာဒေသအကျိုး၊ အနည်းဆုံး ကိုယ့်မိသားစု အကျိုး သယ်ပိုးနိုင်မှသာလျှင် မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ျား (သို့) မိန်းမ ဖြစ်ခွင့်ရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် လူသား တစ်ယောက်ကစလို့ လူသားအများကြီးကို ဆိုးကျိုးပေးတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ ဆိုးယုတ်သူရယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အနေအထိုင် ပိရိပြီး အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်လို့ရသလို အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားလာလည်ပတ်၊ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်သူလည်း ဖြစ်လို့ရပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့တို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုသက်သက်ပါပဲ။
သူတို့ဟာ မြင့်မြတ်သူလား၊ ဆိုးယုတ်သူလား ဆိုတာကတော့ သူ့ရဲ့ အကျင့်စာဂ၊ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုတွေနဲ့သာ တိုင်းတာနိုင်လို့ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ အက်ဒ်မင်က ခံယူထားပါတယ်။
“မိနျးမကောငျးမိနျးမမွတျဆိုတာ …” လို့ အစခြီတဲ့ စာသားတှကေို လူမှုကှနျရကျတှမှော မကွာခဏမြှဝကွေတာကို မွငျဖူးကွမှာပါ။ ရှေးအစဉျအလာ စာပတှေမှောလညျး မိနျးမကောငျးမိနျးမမွတျတှမှော ရှိသငျ့ ရှိထိုကျတဲ့ အင်ျဂါရပျတှအေကွောငျး ရေးသားထားတာကိုလညျး မွငျဖူး ကွားဖူးကွမှာပါ။
သူတို့ အဆိုအရ ဘာသာရေး ကိုငျးရှိုငျးရငျ၊ မိဘကို ရိုသလေေးစားရငျ၊ လငျယောကျြားကို ရိုသလေေးစားရငျ မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျ တဲ့ …
အိမျမှုကိစ်စကြှမျးကငျြနိုငျနငျးရငျ၊ အနအေထိုငျ ပိရိသဝေပျရငျ၊ မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျ တဲ့ ….
အဝတျအစားလုံလုံခွုံခွုံဝတျရငျ၊ မွနျမာဆနျဆနျဝတျစားဆငျယငျရငျ မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျ ပါတဲ့။
အပွငျထှကျလှနျးတဲ့ မိနျးကလေးမြိုး၊ အိမျမှုကိစ်စ စိတျမဝငျစားတဲ့ မိနျးကလေးမြိုး၊ အဝတျအစား မလုံမခွုံဝတျတဲ့ မိနျးကလေးမြိုး၊ အနအေထိုငျ လှတျလပျလှနျးတဲ့ မိနျးကလေးမြိုးက မိနျးမကောငျးစာရငျးမဝငျဘဲ မိနျးမပေါ့ မိနျးမပကျြစာရငျး ဝငျတယျလို့ သူတို့က ယူဆကွပါတယျ။
Related Article >>> မိနျးမဆိုတာကွောကျတတျတယျဆိုတာ မှနျရဲ့လား
ဒီလို သမားရိုးကအြမွငျတှကေို ဘေးအသာခပြွီး အကျဒျမငျတို့ ရိုးရိုးလေး စဉျးစားကွညျ့ရအောငျပါ။
မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘယျလို မိနျးမမြိုးကို မွငျ့မွတျတယျလို့ ချေါနိုငျတာလဲ?
ဘယျလို လူသားမြိုးကိုရော မွငျ့မွတျတယျ ချေါဆိုကွတာလဲ?
လူတဈယောကျရဲ့ မွငျ့မွတျမှုကို သူရဲ့ နထေိုငျမှုပုံစံတှနေဲ့ တိုငျးတာတာ မှနျကနျပါရဲ့လား?
ဣန်ဒွနေဲ့ သိုသိုသိပျသိပျ နထေိုငျခွငျး၊ အနအေထိုငျ လှတျလပျခွငျးဆိုတာ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြးစီရဲ့ မတူညီတဲ့နထေိုငျမှုပုံစံတှပေဲ မဟုတျလား ယောငျးတို့ရေ…
ဒါတှကေို ကွညျ့ပွီး သူကတော့ ကောငျးမှနျတဲ့သူ၊ သူကတော့ ဆိုးယုတျတဲ့သူလို့ တိုငျးတာလို့ ရမယျလို့ အကျဒျမငျကတော့ မထငျပါဘူး။
Related Article >>> မိနျးမဆိုတာ ပါရမီဖွညျ့ဖကျ သကျသကျပဲလား?
ယနအေ့ခြိနျထိ ကမ်ဘာ့သမိုငျးမှာရော မွနျမာ့သမိုငျးမှာပါ နာမညျကြျောကွား ထငျကနျြရဈသူတှဟော ယောကျြားပဲဖွဈပါစေ၊ မိနျးမပဲဖွဈပါစေ သူတို့ ရဲ့ လုပျရပျတှကွေောငျ့ပဲ နာမညျကြျောလာတာပါ။
မာသာထရီဇာ၊ ဖလောရငျ့ နိုကျတငျဂေး၊ မာဂရကျသကျခြာ စသဖွငျ့ ယနအေ့ထိ လူတှမေမနေို့ငျတဲ့ အမြိုးသမီးကွီးတှေ အောငျမွငျထငျရှားလာတာက သူတို့ရဲ့ အနအေထိုငျ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျကွောငျ့မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ စိတျနစေိတျထား၊ စှနျ့လှတျအနဈနာခံမှု၊ ဇှဲသတ်တိနဲ့ ကွိုးစားမှု စတဲ့ အရညျအခငျြးတှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့လူသားတှရေဲ့ အကြိုး၊ ကိုယျ့တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးအကြိုး၊ ကိုယျ့ရပျရှာဒသေအကြိုး၊ အနညျးဆုံး ကိုယျ့မိသားစု အကြိုး သယျပိုးနိုငျမှသာလြှငျ မွငျ့မွတျတဲ့ ယောကျြား (သို့) မိနျးမ ဖွဈခှငျ့ရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတျ လူသား တဈယောကျကစလို့ လူသားအမြားကွီးကို ဆိုးကြိုးပေးတဲ့သူမြိုးဆိုရငျတော့ ဆိုးယုတျသူရယျလို့ သတျမှတျရမှာပါ။
မိနျးမတဈယောကျဟာ အနအေထိုငျ ပိရိပွီး အိမျမှုကိစ်စနိုငျနငျးတဲ့ သူတဈယောကျ ဖွဈလို့ရသလို အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါး သှားလာလညျပတျ၊ လှတျလပျစှာ နထေိုငျဝတျစားဆငျယငျတတျသူလညျး ဖွဈလို့ရပါတယျ။ ဒါဟာ သူ့တို့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုသကျသကျပါပဲ။
သူတို့ဟာ မွငျ့မွတျသူလား၊ ဆိုးယုတျသူလား ဆိုတာကတော့ သူ့ရဲ့ အကငျြ့စာဂ၊ သူ့ရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှု၊ စှနျ့လှတျစှနျ့စားမှုတှနေဲ့သာ တိုငျးတာနိုငျလို့ ရနိုငျပါလိမျ့မယျလို့ အကျဒျမငျက ခံယူထားပါတယျ။
Tags: better, good, Holy, Motivation, Tradition, women